We.com.mm - Huawei အသုံးပြုသူတွေ Google Service နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းခဲစရာမလိုတော့ပါ
Huawei နဲ့ အမေရိက တို့ကြားထဲက ကိစ္စရပ်လေးတစ်ချို့ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက Huawei User တွေကြားစိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြသလို ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ချို့ကလည်း Huawei နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကြားထဲမှာ ငြင်းခုန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီး သတင်းအမှားတွေ၊ အလွဲတွေလည်း အများကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ Huawei ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နံပါတ် ( ၂ ) စမတ်ဖုန်းရောင်းအားအကောင်းဆုံး နဲ့ သြဇာအကြီးမားဆုံး စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပါ။ တကယ်လို့ sanction တွေ၊ trade block တွေကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေရှိလာခဲ့ရင် Huawei တစ်ခုတည်းနစ်နာမှာ မဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက Huawei User တွေ နဲ့ Huawei နဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အကုန်နစ်နာမှာဖြစ်တယ်။
တစ်ချို့သတင်းတွေက အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် လေ့လာမှုတွေလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ နှစ်ဦးှနှစ်ဖက်ပြန်ကြည့်ရမယ့်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ့်အချက်တွေကို တွေ့လာရတယ်။ ဒိုမီနိုကစားနည်းလိုပဲ တစ်ခုပြုလဲရင် နောက်မှာပါတစ်ပြုံကြီးပြိုလဲမယ့် chain reaction တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ လက်ရှိဖုန်းတွေမှာ သုံးနေတဲ့ Google Service နဲ့ပတ်သက်ပြီး အများကြီးစိတ်မပူကြဖို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုမျိုး Google Service Update အပါအဝင်စိတ်ပူနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့အပေါ် user တွေ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိစိတ်ကျေနပ်စေမယ့် Trivia တစ်ချို့ကို အမေးအဖြေပုံစံနဲ့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့ နံပါတ် ( ၁ ) မေးခွန်း
>> Google Service မရမှတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲ .. ဖုန်းက လွှင့်ပစ်လိုက်ရမှာလား ?
လွှင့်ပစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Google Service တွေအသုံးပြုမရတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းဟာ လက်ရှိ user တွေလက်ထဲရှိနေတဲ့ Huawei Device တွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်သလို၊ ဒီသတင်းကြောင့် ဈေးကွက်ထဲရောက်နေဆဲ၊ ရောက်ပြီးသား ထုတ်ကုန်တွေအနေနဲ့လည်း ရှိပြီးသား Google Service တွေရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာ Google ရဲ့ Service တွေဆက်လက်ရရှိနေမှာဖြစ်သလို ဈေးကွက်ထဲက Device တွေအနေနဲ့လည်း တစ်စုံတစ်ရာပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Huawei က ပေးအပ်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဆက်လက်ရရှိနေမယ်။ ဒါဟာ Huawei Mobile ကနေ " တရားဝင် " ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ( ၂ ) မေးခွန်း
>> Update တွေမရတော့ရင် ဖုန်းရဲ့ security က စိုးရိမ်စရာပဲ
မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ User တွေလက်ဝယ်ရှိတဲ့ ဘယ် Huawei Device မှ Google ကနေ ပေးထားတဲ့ security service, Update စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေမရမှာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ အရင်အတိုင်းဆက်လက်ရရှိနေဦးမှာပါ။ နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ Huawei က ဈေးကွက်ထဲမှာ မိတ်ဆက်ထားတဲ့၊ ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတဲ့၊ instock ရှိနေတဲ့၊ user လက်ထဲရှိနေတဲ့ Huawei Device တွေအကုန်လုံး security update တွေဆက်လက်ရရှိနေမှာဖြစ်သလို၊ Google Play Store ကနေလည်း Google App တွေ၊ Update တွေဆက်ပြီးရရှိနေဦးမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့ Google က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတစ်ခုအရပါ။ " ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ အမိန့်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ဖြစ်ပျက်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်လျှက်ရှိသည်။ လက်ရှိ Huawei ထုတ်ကုန် သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် Google Play နှင့် Google Play Protect မှ security protection များအား ဆက်လက်ရရှိသွားမည်ဖြစ်သည် " လို့ Google ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ Google အနေနဲ့ ံံ့Huawei နဲ့ဆက်လက်ပြီး လက်တွဲဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်၊ ပြန်ကြည့်ရမယ့် worldwide user တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။
နံပါတ် ( ၃ ) မေးခွန်း
>> ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် Huawei ရဲ့အနာဂတ်က ခိုင်မာမှုရှိပါ့မလား ?
သိပ်ခိုင်မာတာပေါ့။ Huawei ဆိုတာ Android ရဲ့ အကြီးဆုံး နဲ့အရေးအပါဆုံး မိတ်ဖက်တစ်ဦးပါ။ Huawei ဖုန်းတစ်လုံးကို ဝယ်လိုက်တာဟာ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီး Android ရဲ့အကြီးဆုံးမိတ်ဖက်တစ်ဦးဆီက ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူလိုက်တာပါပဲ။ Huawei ဘက်ကနေလည်း သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်အတွက် ထုတ်ကုန်ရဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးမှုတွေပေးသွားမှာပါ။ တစ်ဖက်မှာ ပြသနာမျိုးစုံ၊ အသံမျိုးစုံကြားနေ၊ ဖြစ်နေပေမယ့် အဲဒီအရာတွေက Huawei ရဲ့ ထုတ်ကုန်သစ်တွေတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်တာကို ရပ်တန့်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ? တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ Huawei သုံးစွဲသူပေါင်း သန်း ၄၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကို Huawei ရော၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေဟာ User သန်းပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ဆီက ဘီလျံနဲ့ချီတဲ့ဝင်ငွေတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။
နံပါတ် ( ၄ ) မေးခွန်း
>> ဒါဆို ဈေးကွက်ထဲမှာ ထုတ်ကုန်အသစ်တွေမြင်ရဦးမှာလား ?
ဟုတ်ကဲ့ .. မြင်ရတော့မှာပါ။ မကြာခင်အချိန်အတွင်း Huawei ကနေ Y Series အသစ်ကို မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်သလို P30 Series ရဲ့ အရောင်သစ် Amber Sunrise ကိုလည်း မိတ်ဆက်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
လေ့လာလို့ရသလောက်ကတော့ လက်ရှိမှာ Google က Huawei နဲ့ညှိုနှိုင်းနေဆဲ အခြေအနေမှာပဲရှိနေသေးပြီး Google ဘက်က သေချာတဲ့ decision မချမှတ်သေးတာကြောင့် လက်ရှိ Device တွေ၊ ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတဲ့ Device တွေအနေနဲ့ Google Service နဲ့ Update တွေကို ဆက်လက်ရရှိနေဦးမယ်ဆိုတာတော့သေချာပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒေါ်လာသန်း ၄၀၀ လောက်ဝင်ငွေတွေကိုလည်း ထည့်တွက်ရဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ( ၃ ) လပြည့်ပြီး စက်တင်ဘာလထဲမှာတော့ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Source - news.google.com/thenews.com/pk ( Google clarifies on Android updates for Huawei Phones )